Isikhokelo esivela kwi-Semalt: I-Business yakho ingahamba njani kwiDiam
Kwiinkampani ezininzi, uphuhliso lwezobuchwepheshe lwexesha elitsha le-digital likhoyoezingenamkhawulo. Amafemu amaninzi aya kwi-intanethi ngenxa yekhono elihamba phambili loPhando lweeNjini zoPhando (SEO). Ngenxa yoko, kunjalokubalulekile ukuba ishishini lithathe i-intanethi njengesiteshi esitsha sokuthengisa, esenza ukuba amashishini atye kakuhle.
Ukwenza ibhizinisi lakho ledijithali liphumelele kwi-intanethi, qwalasela le miba, ngokuchanekileyoechazwe ngu-Oliver King, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt .
1 - rehvid michelin. Umatshini ohlakaniphile
Ukusebenza komatshini kuthatha indawo yokuzimela ngokukhawuleza. Kwezinye iimeko, kukho ukukhulaukusetyenziswa kwezixhobo ezifanelekileyo. Kwi-Intanethi yezinto (IoT), abahlalutyi baxela ukuba ngo-2020, ngaphezulu kwama-208bhiliyoni "oomatshini abahlakaniphile"iya kusebenzisa uxhumano lwe-intanethi. Ngokutsho kwetheknoloji yakutshanje, iifowuni eziqhelekileyo zinamakhono afana ne:
Ukuzenzekelayo njengemoto yokuzilawula
Ukujonga (njenge-sensors i-IOT njenge-NFC)
ukushicilela 3d ukudala ezininzi iziphumo 3d ngokomzimba
Ukwabelana ngama-API anika amandla ukubonelela ngeendlela ezikhoyo kwi-intanethi
Ukusebenzisana komsebenzisi onjengokuqaphela intetho, iimpepha zeminwe kunyeukucoca ngokwabo
2. Ikhompyutha yeCognitive
I-Intelligence Intelligence (AI) ithatha ukusebenza komshini ohlakaniphile.Ngokusebenzisana kobuchwephesha obuhlukeneyo, iikhomputha zengqondo zingacinga, zisebenzisana, zifunde kwaye ziqonde umhlaba..Okwangoku, oomatshini abanobulumko abaneengqondo zobuqhetseba bancedisa umsebenzi wabantu. Banceda kwiinkalo ezinjeiziprofeto kunye nokuqonda kwiinguqu ezibalulekileyo. Kwilizwe lezoshishino, iikhomputha ziyakwazi ukuhlalutya izithethe kwaye zinike isisombululongethuba eliphezulu lokuphumelela.
3. Ukuphazamiseka kweenguqu
I-teknoloji inamandla kakhulu xa ifika kwi-IT. Olu phuhliso lithethaukuba kufuneka ulungele ukufumana iindlela ezintsha zokuphucula ibhizinisi lakho. Amasu amatsha angabandakanya ukuphazamiseka okukhulunjengoko kuqesha abasebenzi abaninzi nokufumana ukusetyenziswa kwabasebenzi abathile abavumelekanga. Ukuphazamiseka kunokubandakanya ukuthatha abasebenzi bakho ukuqeqeshwa kwezinye i-intanethizobuchule ezifana nokwakha izakhono. Olu hlobo lokuphazamiseka alukhethwa ngokunyanisekileyo ngabasebenzi abaninzi. Njengokuba abanye bephikisana, kuyimfanelo yenubaqinisekise ngokubaluleka kwendlela kunye nexesha elide elixhamlayo kwinkampani.
4. ZobuGcisa (i-14)
Oku kubandakanya izinto ezikhankanywe apha ngasentla kunye nexesha leenkcukacha kunye nokuhlalutya. Elitshaamashishini aqala ngenxa yamathuba amaninzi kwi-intanethi kwaye iikhomputha zivelisa. Ngokomzekelo, kwihlabathi lezixhobo,iiwebhusayithi zizenzela amava abo ngokucoca umxholo kubafundi bayo. Iinjongo zophando ezifana ne-Google zinakho ukukwaziuqikelele into yokukhangela oyifunayo. Kwezinye iimeko, ukukhangisa okujoliswe kuyo kuthathe i-intanethi ngokuzisa umfanekiso ongconouhlalutyo lweemarike.
Iinkampani ziyakwazi ukuhamba kwi-intanethi ukufumana ukubonelela ngokukhawuleza kwabathengi abatsha. Ngokusebenzisa i-SEO, abasebenzisiukudala ubungqina bentengiso eqinile kunye nokubeka indawo enempilo kwi-SERP ngokusetyenzwa kwegama elikhethiweyo. Le meko yintliziyoukuthengiswa kwe-intanethi. Yonke ishishini lizama ukufezekisa le mpawu. Imiba engentla iyakuchukumisa ishishini lakho ngokubandakanyaisiteji yedijithali kwezinye zezinto ezibalulekileyo iqumrhu elinalo.